Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » zimbabwe » Vafambi Vemudzimba Vave Kutyaira Kudzoreredzwa Kwekushanya muZimbabwe
Vafambi Vemudzimba Vave Kutyaira Kudzoreredzwa Kwekushanya muZimbabwe
Mufananidzo unofadza Leon Basson anobva kuPixabay
Kuvandudzwa kweindasitiri yezvekugamuchira vaenzi muZimbabwe kuchawedzera zvikuru misika yemunyika munguva pfupi inotevera sezvo misika yepasi rose ichiri kutsika mushure mechirwere cheCovid-19.
Kushanya nekugamuchira vaeni zvibereko zvehupfumi zvakaderera, izvo zvinotarisirwa kukura kusvika paUS$5 bhiriyoni panosvika 2025 zvichitariswa kuti nyika ine zvinhu zvakakura uye zvinoyevedza zvakaita seVictoria Falls, imwe yeSeven Wonders of the World.
Nekudaro, kubuda kwedenda reCCIDID-19 kwakanganisa kufambira mberi kune chinangwa, yakashuma The Herald. zimbabwe zuva nezuva. Mafemu mazhinji ezvekugamuchira vaenzi akakanganisika, izvo zvakaratidza mukuderedzwa kwavo kwekuita kwemihoro. Zvimwe zvezvivakwa zvavo zvakavharwa kwenguva nekuda kwekudonha kusati kwamboitika sezvo denda rakarova nyika muna 2020 nezvirambidzo zvekufamba zvakatemerwa pasirese.
Pari zvino, vanoona nezvemisika vanoti misika yemuZimbabwe inofanirwa kubatsira bazi rezvekushanyirwa kwenyika uye kutungamira kuvandudzwa kwayo munguva pfupi kana yepakati.
"Indasitiri inofungidzirwa kuti icharamba yakanyarara munguva pfupi sezvo kudiwa kubva kumisika mikuru kuri kuita kuti idzoke. Kudzoreredza kuchaenderana nekukwira mukushanya kwemumba mukati meiyi nguva, "stockbrokers IH Securities akadaro.
Nepo kuita kwese kwehafu yekutanga ya2021 (1H21) yakaramba yakaora mwoyo kubva pakuvandudzwa kwenyika kuvharika, kwaisava kusiririsa uye kusviba nehuwandu hwekugara kwevaridzi vakarongwa vachikwira kusvika pamakumi maviri nemana muzana kwemwedzi mitanhatu kusvika Chikumi 24 zvichienzaniswa negumi nepfumbamwe muzana. indasitiri yekugara muna 6.
Avhareji yemitengo yemazuva ese yaive ichiri kutevera 2019 paUS $91, zvichikonzerwa nekuderera kwebhizinesi rekunze, iro rinowanzobhadhara mumitengo yeprimiyamu. Munguva iyi, kufamba pakati pemaguta uye kuungana kwevanhu kwairambidzwa. Kufamba-famba kwemaguta mutyairi mukuru wekuita musangano bhizinesi rinova iro rinopa rubatsiro mukugadzira mari. Huwandu hwepakati hwezuva nezuva hwakakura nezvikamu makumi maviri nemana kubva muzana kuvhara nguva paUS$24, ukuwo mari inowanikwa pakamuri yaiwanikwa yakawedzera nezvikamu makumi matatu nerimwe kubva muzana kusvika paUS$8,395. Kugara kwekamuri kwehafu yegore kusvika Gunyana 31, 2,014, yaive 30 muzana.
Kukura kuchatsigirwa nekurerutsirwa kwezvirango zveCCIDID-19 ukuwo chirongwa chekudzivirira chepasi rose chiri kutarisirwa kuenderera mberi nekufambisa kuvhurwa kwekufamba kwenyika pamwe nekushanya kwemumba. Kuburitswa kwezvirongwa zvekudzivirira uye kudzoka zvishoma kune zvakajairwa mumisika yakakosha senge United Kingdom neUnited States inotarisirwa kuunza mambakwedza mukurwisa hutachiona uye nekuzovandudza muindasitiri yekufambisa uye yekugamuchira vaeni.
Nyanzvi muchikamu ichi zvakare dzinoona kudzoreredza kwakavakirwa pakukwanisa kujairana neyakajairwa iyo dhijitari iri kukurumidza kukura, inotsigira kushanda kure. Izvi zvinopokana kuti tekinoroji ndiyo imwe yemaitiro akakosha ekupesvedzera chikamu chekugamuchira vaenzi muna 2022 uye kuti urambe uripo, budiriro yetekinoroji icharamba ichitsigira mamaneja ekugamuchira vaenzi mukuita kuti zvivakwa zvavo zvinyatsoshanda.
Dzimwe nhau dzeZimbabwe
Covid-19 COVID-19 dambudziko Tanzania ushanyi United Kingdom nyika dzakabatana zimbabwe
Maitiro ekumisa Ngozi yeBerlusconi's Candidacy muItari
Vakuru veBelarusian vakapomerwa mhosva yekubira ndege muUS Federal Court